Muuqaallo YouTube-ka bilaashka ah | YouTube-ka bilaashka ah ee bilaashka ah | Faallooyinka YouTube ee bilaashka ah
Muuqaallada YouTube-ka ee bilaashka ah | Jeceshaha YouTube ee bilaashka ah
Macaamiisha YouTube ee bilaashka ah | Faallo YouTube bilaash ah
#1 Madal ka-qaybgalka YouTube si aad u hesho aragtiyo YouTube, jecel, faallooyin iyo macaamiil dadka dhabta ah!
Sidee u shaqeysaa? Lacag qadaadiic ah ku hel adigoo la macaamilaya kanaalada xubnaha kale. Ka dib, u soo deji fiidiyowyadaada GoViral, dooro adeegyada aad rabto inaad hesho iyo daqiiqado gudahood, waxaad bilaabi doontaa inaad hesho aragtiyo, faallooyin iyo macaamiisheeda dadka dhabta ah, bilaash!
Hel kobaca YouTube ee bilaashka ah hadda! or Iibso YouTube Subscribers
Faa'iidooyinka Isticmaalka GoViral Daily
Runtii Waa Bilaash In La Adeegsado!
La kulan adeeg tayo sare leh oo bilaash ah ikhtiyaariyada aad ku cusbooneysiineyso khidmad.
Wuxuu Ku Siinayaa Aragtiyo Bilaash ah, Jecel, Macaamiil & Faallooyin
Shabakadeena waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso leh oo fudud u kasbato macaamiisha bilaashka ah, aragtida, waxyaabaha jecel iyo faallooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay!
Kobaca YouTube iswada
Geli fiidiyowyadaada shabakadeena kuna dar tirada adeeg kasta oo aad rabto inaad hesho. Kadib, ka dhaqaaq oo u oggolow shabakadeena inay si otomaatig ah kuugu soo gudbiso wax walba.
Waxay hagaajinaysaa koritaanka jirka
Kasbashada macaamiisha, aragtiyada, waxyaalaha jecel iyo faallooyinka ayaa kaa caawinaya kordhinta qiimeyntaada raadinta, taas oo gacan ka geysaneysa kordhinta koritaankaaga iyo hawlgelinta.
Waqtiga Ayuu Kuu Badbaadayaa
Focus on your content and hamiday halka shabakadeena ay gaarsiin doonto ka qeyb qaadashada kanaalkaaga iyo fiidiyowyadaada.
Fudud Si Aad U Isticmaalid
Isku xirnaantayadu waa mid saaxiibtinimo leh oo is sharaxaysa. Soo gal, soo dejiso fiidiyowyadaada, xulo tirada macaamiisha, aragtiyada, jecel iyo faallooyinka si aad u hesho oo aad dhamayso!
Diiwaangalso akownkaaga bilaashka ah hadda
Ku kasban lacag qadaadiic ah adoo daawanaya fiidiyowyada iyo la shaqeynta iyaga.
Bixiso qadaadiicdaada si aad u hesho aragtiyo bilaash ah, waxyaabaha jecel, macaamiisha iyo faallooyinka.
Fadhiiso intaad heleyso macaamiisha, aragtiyada, waxyaalaha jecel iyo faallooyinka!
Waxay iga caawineysaa inaan kor u qaado kanaalkayga…
Tani waxay ahayd kobcintii aan u baahnayn si aan deg deg ugu helno boggeena!
Waa maxay ADEEGA weyn!
Aad baad ugu mahadsan tihiin wiilasha adeegan aadka u weyn! GoViral waa barnaamijka ugu wanaagsan ebid!
Xagee jirtay sanadii la soo dhaafay?
Hel Aragtiyo YouTube oo Bilaash ah kuna kasbo Ganacsi qiimo leh Kusoo Laabashada Suuqgeynta YouTube
Ma waxaad dooneysaa inaad kobciso ganacsigaaga oo aad sare u qaaddo faa'iidadaada ganacsi? Waa inaad isticmaashaa suuqgeynta fiidiyowga. Istaraatiijiyad suuqgeyn ganacsi oo casri ah ma dhameystirna maanta qorshe la’aan suuqgeynta fiidiyowga. Ka dib oo dhan, markay tahay suuqgeynta waxyaabaha ku jira, fiidiyowyadu waxay diiwaangeliyaan ROI-yada ugu sarreeya. Macno malahan ujeedooyinkaaga gaarka ah ee ka dambeeya ku lug lahaanshaha suuqgeynta fiidiyowga, layliga ayaa hubaal ah inuu gaarsiinayo.
Suuqgeynta fiidiyowga ayaa si wanaagsan looga aqoonsan yahay wareegyada suuqgeynta awooddeeda ay u waddo ka shaqeynta macaamilka iyo inay u horseeddo hagitaanno meheraddaada ah. Haddii aadan wali ku darin suuqgeynta fiidiyowga qorshaha suuqgeynta waxyaabahaaga, waa waqtigii aad sidaas sameysay. Suuqgeynta fiidiyowga ayaa kaliya sare u qaadeysa heerarka sare mustaqbalka dhow waxayna soo bandhigi doontaa faa'iidooyin badan oo suuqgeyn u ah ganacsigaaga.
Maxaad ugu dooratay YouTube marti gelinta meheraddaada suuqgeynta fiidiyowga ah
Kama hadli karno fiidiyowyada tooska ah ee internetka mana sheegi karno YouTube. Websaydhka martigelinta iyo wadaagga fiidiyowga ayaa noqday mid la mid ah waxyaabaha fiidiyowga internetka ku jira. Xaqiiqdii, dadka badankood ma oga, laakiin YouTube waxay u dhacdaa inuu yahay mashiinka raadinta labaad ee ugu caansan adduunka. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ku leedahay dhagaystayaal diyaar ah websaydhka, iyo soo gelinta waxyaabaha fiidiyoowga ah ee suuq-geynta ah ee YouTube-ka ayaa kaa caawinaya inaad ka sarayso xagga SEO sidoo kale. Kasbashada aragtida YouTube ee kanaalkaaga ganacsiga YouTube wuxuu kaa caawin karaa inaad sifiican uhesho muuqaalka sumaddaada iyo inaad horumariso gaadhistiisa. Marka, maxaad suurtogal u tahay inaad doorato websaydh kale oo fiidiyoow ah oo martigaliya si aad ugu soo dirto fiidiyowga suuqgeynta suuqgeynta?
Faa'iidooyinka la qiyaasi karo ee xogta la taageeray ee suuqgeynta YouTube
Qeybtaan, waxaan si faahfaahsan u eegeynaa dhammaan faa'iidooyinka aad hesho markii aad doorato YouTube oo ah barta aad doorbideyso ee wadaagista fiidiyowyada loogu talagalay suuqgeynta ganacsigaaga:
Soo-gaadhis aan la rumaysan karin - YouTube waa boqorka dhammaan adeegyada shabakadaha fiidiyowga la wadaago. Isticmaalayaasha laga bilaabo da'da 15-55 waxay marin u helaan madal si joogto ah. Waa ammaan in la yiraahdo fiidiyowgu wuxuu kaa caawin karaa inaad ogaato. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tiro fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo ku saabsan websaydhka, oo waxaad u baahan tahay inaad karti u yeelatid fiidiyeyaal fiidiyoow leh si aad u hubiso inaysan ku lumin badda dhammaan fiidiyowyada tirada badan ee halkaas lagu martigeliyey. Kasbashada aragtiyaha muuqaalkaaga fiidiyowga waxay caddeyn kartaa inay tahay shaqo adag. Sababtaas awgeed, haddaad heli karto waddo aad ku hesho aragti lacag la'aan ah YouTube ganacsigaaga kanaalka YouTube, waa inaad si fudud ku qabataa.
Gaadhi aad u sareeya - YouTube wuxuu diiwaangeliyaa taraafikada isticmaalaha sare maalintii oo dhan. Dadkeeda adeegsada bilyan-xoogan waxay daawataa in ka badan bilyan saacadood oo fiidiyowyo ah oo ku saabsan websaydhka martigelinta. Adeegga fiidiyowga ee bilaashka ah ayaa awood u leh inuu gaaro dhagaystayaal ballaadhan oo ka badan telefishanka telefishanka. Waxay siisaa ganacsiyada leh istiraatiijiyad faafinta qiimo jaban ee fiidiyowyada suuqgeynta ay soo saaraan. Haddii si sax ah loo isticmaalo, adiguba waad ku kala sareyn kartaa balaayiin aragtiyo ah oo ku saabsan suuqgeynta fiidiyowga suuqgeynta ah, adoo damaanad qaadaya qulqulka ganacsiga soo galaya astaantaada.
Awoodda cudurka - YouTube wuxuu siiyaa ganacsiyada leh awood badan oo ka dhigi kara waxyaabaha ay fiidiyooga ka dhigayaan inay noqdaan kuwo faafin. Waxaad ku meeleyn kartaa fiidiyowgaaga dhowr isgaarsiin oo kale oo suuq-geyn ah, sida inaad ku qasto boostadaada blog ama aad la wadaagto iskuxirkeeda gole wada hadal ee LinkedIn.
SEO-ga la hagaajiyay - Tan iyo markii ay Google heshay YouTube, mashiinka raadinta ayaa ku qiimeeya websaydhyada leh fiidyowga fiidiyowga ee YouTube-ka oo sarreeya mashiinnada raadinta. Si kale haddii loo dhigo, maahan oo keliya dhismaha istiraatiijiyaddaada fiidiyowga ee ku saabsan YouTube-ka waxay kaa caawineysaa inaad ku guuleysato aragtiyo faa'iido u leh suuqgeyntaada YouTube, laakiin waxay sidoo kale ka faa'iideysaneysaa dadaalkaaga suuq-geynta guud ee dijitaalka ah. Marka qiimeynta SEO ee boggaaga ganacsiga la kobciyo, boggaaga astaanta magacaagu wuxuu si otomaatig ah u diiwaangeliyaa bogagga-aragtida sare.
Is dhexgalka fudud ee suuqgeynta warbaahinta bulshada - Waxba ugama shaqeynayaan si wax ku ool ah suuqgeynta warbaahinta bulshada marka loo eego waxyaabaha fiidiyowga la wadaagi karo. Markaad u sameyso fiidiyow suuq geyn qiimo sare leh ganacsigaaga YouTube, waxaad ku raaxeysaneysaa dabacsanaanta aad kula wadaageyso boggagaaga warbaahinta bulshada. Dad badan ayaa laga yaabaa inay u daawadaan fiidiyowyada barnaamijyada warbaahinta bulshada ee ka muuqda quudintooda wararka marka loo eego raadinta kanaalkaaga ganacsiga. Haddii ay ka helaan waxyaabaha aad kahesho fiidiyowga in lagu jeclaado baraha bulshada, si fudud ayey ula wadaagi doonaan asxaabtooda iyo kuwa ay garanayaan iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada ee shaqsiyadeed. YouTube, markaa, waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku darsato faa'iidooyinka suuqgeynta fiidiyowga iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada hal istiraatiijiyad suuq geyn natiijooyin sare leh.
Caalamku wuxuu gaari karaa - YouTube wuxuu ku raaxeeyaa caan adduunka oo dhan. Waxay ka shaqeysaa 88 dal waxaana lagu bixiyaa 76 luqadood oo kala duwan. Ma jiro adeeg kale oo martigelinaya fiidiyowga websaydhka ah oo fidin kara fiidiyowyadaada suuqgeynta ganacsiga adduunka oo dhan oo YouTube-ka awood u leh. Markaad hesho aragtida bilaashka ah ee YouTube-ka oo aad si guul leh u kordhiso aragtida-tirinta fiidiyowyada suuqgeynta magacaaga ee YouTube-ka, waxaad siineysaa xayiraad xayiraad bulshada ah. Dhageystayaashu way u dhego nugul yihiin fiidiyoo leh aragti-tirid sarreysa marka loo eego fiidiyow u muuqda in ay daawadeen dad yar oo iyaga ka horreeyay.
Sida loo bilaabo suuqgeynta YouTube
Hadda oo aad diyaar u tahay inaad dhex gasho Suuqgeynta YouTube, waxaan u maleynay inaad adeegsan karto hage ku saabsan sida loo bilaabo. Suuqgeynta YouTube-ka waxay umuuqataa mid culeys ku ah bilowgayaasha aan u adeegsan adeegsiga fiidiyowga iyo adeegsiga qalabka suuqgeynta. Suuqgeynta wax ku oolka ah ee YouTube waxay ku lug leedahay hawlo faro ku tiris ah oo u baahan taxaddarkaaga iyo daryeelkaaga. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato sida loo abuuro kanaalka YouTube natiijooyinka ugufiican isla markaana aad ufiiciso fiidiyowyada aad ka sameysid YouTube si aad uguhesho mashiinada raadinta khadka tooska ah. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fahamto sida loo maareeyo loona shaqeeyo ololayaasha xayeysiinta YouTube, iyo sidoo kale inaad falanqeyso cabbiraadda ay heli karaan falanqaynta fiidiyowga ee YouTube-ka.
Hoosta, waxaan la wadaagnaa tilmaamayaal ku saabsan sida aad u bilaabi karto safarkaaga suuqgeynta fiidiyowga YouTube-ka ah si wax ku ool ah si aad uga faa'iideysato ganacsigaaga sumadda.
Abuuritaanka iyo ku shaqeynta kanaalka YouTube ganacsi
Haddii aad rabto inaad ka hesho faa iidooyinka ugu fiican suuq geyntaada ganacsiga YouTube, dooro Xayeysiis Nooc ah oo Google ah si aad uqorto YouTube intii aad isticmaaleysid koontadaada gaarka ah. Account A Brand wuxuu awood u siinayaa dad badan inay ku soo galaan koontadaada magacaaga YouTube, oo maahan oo keliya qofka abuuray. Haddii aad isticmaasho koontadaada gaarka ah ee Google, magacaaga isticmaale koontada YouTube-ka ayaa noqon doona midka aad horay ugu caymisay naftaada Google. Abuuritaanka iyo maamulida kanaallo badan oo YouTube ah isla mar ahaantaana waxay noqoneysaa khibrad aan xuduud lahayn oo leh Xisaab Calaamadeed, oo aad ka faa'iideysan doontid markay meheraddaadu kororto.
Abuuritaan wax ku ool ah ayaa si dhib yar weligiis suurtagal u ah iyada oo aan la helin cilmi baaris ku filan. Haddii aad rabto in fiidiyowyadaada YouTube ay si wanaagsan wax u qabtaan, wax yar ka baro cilmiga bulshada ee dhagaystayaasha YouTube-ka. Dhaqan noocee ah ayaa intooda badani ka soo jeedaan, waa maxay da'da ay ku kala duwan yihiin, sideese u doortaan inay cunaan waxyaabaha aad ka kooban tahay? Ku barashada naftaada macluumaadkan waxay kaa caawin doontaa inaad soo saarto beddelaad sare oo ku saabsan waxyaabaha suuqgeynta fiidiyowga YouTube-ka ah. Haddii aad horeyba ugu daabacday waxyaabaha fiidiyowga kanaalkaaga 'YT channel', waxaad isticmaali kartaa tabka bogga 'Analytics' si aad wax uga baratid tirakoobka dadka iyo dhagaystayaasha. Ka raadi iskudhafyada tirakoobka dhagaystayaasha ee ay la socdaan kuwa raacsan bogagga kale ee warbaahinta bulshada. Waa inay kaa caawiso abuuristaada guud ee suuq geynta.
Isbarbar dhig oo qiimee waxqabadka magacaaga YouTube-ka iyo kan kula tartamaya. Eeg aragtida ku saabsan fiidiyowyadooda iyo tirada macaamiisha kanaalladooda. Kadib waxaad u dajin kartaa jaangooyooyin waxqabadka fiidiyowyadaada suuqgeynta YouTube-ka waafaqsan. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad ogaato ereyada muhiimka ah ee ay isticmaaleen iyo sharaxaada waxyaabaha ay bixiyeen si loogu dhiirrigeliyo farsamadaada fiidiyowyadaada. Taasi waxay tiri, had iyo jeer asal u noqo qaabkaaga. Haysashada tab ku saabsan fiidiyowyada u janjeeraya YouTube sidoo kale waa dhaqan wanaagsan, oo kaa caawin doona inaad soo xajisatid talooyinka iyo tabaha abuurista fiidiyoowga waxqabadka sare leh.
U-habeynta waxyaabaha ka kooban fiidiyowga YouTube natiijooyinka ugu wanaagsan
YouTube waa mashiin raadinta fiidiyow ah oo qiimeeya waxyaabaha uu ka kooban yahay iyadoo ku saleysan ereyada muhiimka ah, cinwaannada, sharaxaada, iyo wixii la mid ah, oo la mid ah mashiinnada kale ee raadinta. Haddii aad rabto inaad ka hesho fiidiyowgaaga fiidiyowga YouTube-ka ah si fudud oo aad u hesho aragti bilaash ah YouTube-ka asal ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad ku fiicnaato fiidiyowyada aad u sameysid adeegga martigelinta. Algorithm-ka talo bixinta YouTube wuxuu soo jeedinayaa fiidiyowyada dhagaystayaasha iyadoo lagu saleynayo doorbidooda daawashada. Kama ogaan kartid tirinta muuqaalka sare ee fiidiyowyada aad abuureyso adoo samaynaya cilmi-baaris aasaasi ah oo muhiim ah oo ku saabsan YT iyo farsamaynta waxyaabaha fiidiyowga la xiriira ee ereyada muhiimka ah ee waxqabadka sare leh. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa -
La imow cinwaan adag oo leh ereyo muhiim ah oo la aqbali karo oo ay aqbali karto YouTube algorithm. Iskuday inaadan noqon spammy ama raac qaabka qoritaanka-riix-riix; waxay lama huraan u horseedi doontaa SEO-ga liita fiidiyowgaaga YouTube.
Habee sawirkaaga yar ee fiidiyowga ah. Thumbnail-kaaga fiidiyowga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee dhagaystayaashu ka ogaadaan fiidiyowgaaga YouTube. Thumbnail soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh ayaa dadka ku dhiirrigelin doona inay riixaan oo ay ciyaaraan waxyaabaha ku jira fiidiyahaaga YouTube. Ka dhig thumbnail-ka sida ugu-xallinta badan intii suurtogal ah natiijooyinka ugu wanaagsan.
Qor sharaxaad muuqaal ah oo kooban. Dadku waxay u badan tahay inay ciyaaraan fiidiyoow oo ay daawadaan ilaa dhamaadka illaa iyo hadda haddii ay xaqiijin karaan in mawduuca fiidiyowga ay iyaga xiiseynayaan. Faahfaahin fiidiyoow ah oo erey-hodan ku ah fiidiyahaaga ayaa ka dhigi doonta fiidiyahaaga mid soo jiidan kara daawadayaasha isla markaana ka caawin doona inuu ku sii sugnaado muddadaas.
Ku dar CTA-yada qaab kaararka ah, calaamadaha biyaha, iyo xayeysiisyada xayeysiinta. Waxaad dooneysaa dhagaystayaasha fiidiyowgaaga xayeysiinta ah ee YouTube inay tallaabo ka qaadaan ganacsigaaga. Si xeel dheer u gelinta walxahan waxyaabaha aad ka kooban tahay ee suuq geynta ah ee muuqaalka YouTube-ka ah waxay siin kartaa dhagaystayaashaada fiidiyowga riixitaanka ay u baahan yihiin si ay u galaan meheraddaada iibinta ganacsiga.
Ku dhiirrigeli dhagaystayaashaada YouTube inay jeclaadaan, wadaagaan, oo ay iska diiwaangeliyaan fiidiyowyadaada. Waxay wadataa hawlgelinta waxayna saameyn ku yeelaneysaa darajadaada algorithm-ka YouTube-ka si wanaagsan.
Istaraatiijiyad suuqgeyn ah oo wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo YouTube-ka ah ayaa ah mid si joogto ah dib-u-qiimeyn ugu sameysa isla markaana dib u habeyn ku sameysa si ay ula jaanqaado baahiyaha iyo rabitaanka dhagaystayaasha. Waxay sidoo kale la socotaa xawaaraha suuqyada ugu dambeeyay. Markaad u sameysid kanaal YouTube ganacsigaaga, waxaad ku fiicnaan doontaa inaad sameysid oo aad raacdo jadwalka daabacaadda fiidiyowga si aad u abaabusho dadaalkaaga suuqgeynta fiidiyowga.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad sii iftiimiso waxyaabaha aad ka kooban tahay adoo ku daraya qoraallo iyaga ku jira, u abaabulaya liisaska liiska, iyo u sameysashada jilitaanka kanaalkaaga YouTube. Waad ku kala duwanaan kartaa faylalkaaga fiidiyowga ah YouTube-ka adoo abuuraya noocyo fiidiyowyo kala duwan ah si aad ugu suuq geyso astaantaada Tusaale ahaan, waad soo rogi kartaa barta fiidiyow ee Khibradda Macaamiisha lamaane kasta oo fiidiyoow sharraxa ah oo aad u horumariso kanaalkaaga.
Suuqgeynta saamayntu waxay hadda diiwaangelineysaa guul sare. Waad xiriiri kartaa iskaashi aad la leedahay 'YouTubers' caan ah si aad caan uga ahaato magacaaga kanaalka fiidiyowga YouTube-ka ama aad u yeelato saamileyaal caan ah oo kula wadaaga fiidiyowyadaada warbaahinta kale ee bulshada. Tabaha loo adeegsado kanaalka YouTube-ka ee sida wanaagsan loo jecel yahay ayaa ah in lagu qiimeeyo waxqabadka muuqaalkaaga fiidiyoowga ah ee YouTube xilliyo kala duwan iyo isbadal lagu sameeyo sida la doonayo in loogu cusbooneysiiyo waqtiyada. Qalabyo dhowr ah, sida Canva iyo Channelview, ayaa laga heli karaa khadka tooska ah, oo kaa caawin kara isla markaana kobcin kara dadaalkaaga suuq-geynta. Haddii aad rabto inaad xoojiso suuqgeyntaada fiidiyowga ee 'YT', waxaad ka fiirsan kartaa inaad iyaga u shaqeysid sidoo kale.
Isku soo wada duuboo, suuq geynta YouTube-ka waxay umuuqataa mid aan maskax laheyn markii aad damacsantahay inaad kusoofuro aduunka suuqgeynta fiidiyaha. In kasta oo ay jiraan dhowr fiidiyow oo martigelinaya iyo adeegyo wadaag ah oo lagu bixiyo bilaash khadka tooska ah sida Vimeo iyo DailyMotion, haddana cidina iskama horkeeni karto gaadhitaanka iyo fudaydka isticmaalka ee ay bixiso YouTube. YouTube wuxuu bixiyaa muuqaal caalami ah oo caan ah oo lagu marti galiyo isla markaana lala wadaago websaydh iyadoo la adeegsanayo qaab fudud oo fudud oo aan dhib lahayn oo xitaa darajooyinka bilowga ah u adeegsan karaan gelinta waxyaabaha ay ka kooban yihiin fiidiyaha. Maanta, YouTube sidoo kale waa mid ka mid ah boggaga internetka ee loogu isticmaalka badan yahay dhammaan warbaahinta dhijitaalka ah. Waxaad ku fiicnaan laheyd adoo ka faa'iideysanaya awooddeeda si aad u gaarto dhagaystayaal ballaadhan astaantaada.
Waxaan si faahfaahsan uga sharaxnay dhammaan tallaabooyinka aad raaci karto si aad u horumariso istiraatiijiyad suuqgeyn wax soo saar YouTube ah oo ku saabsan ganacsigaaga. Haddii aad u maleyneyso inaad ka faa'iideysan doonto caawimaad dheeraad ah oo lagu abuurayo kanaal ganacsi oo guuleysta YouTube, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Hel aragtiyo YouTube oo bilaash ah oo aad u xoojiso suuq geynta fiidiyowga ganacsigaaga habka ugu wanaagsan ee suuragalka ah. Haddii aad rabto in dhagaystayaashaadu ay rajeeyaan nuxurka ay soo saartay kanaalkaaga YouTube kanaalkaaga, waad ku kalsoonaan kartaa khibradeena iyo khibradeena inaan ku caawiyo. Ku kobci dhagaystayaashaada YouTube iyo macaamiishaada ganacsi isla neef!
Su'aal ma ka qabtaa GoViral? U fiirso liiska hoose su'aalaheenna inta badan la is weydiiyo. Haddii su'aashaadu aysan halkan ku qorneyn, markaa fadlan nala soo xiriir.
Sifudud diiwaan, ka dibna login oo booqo qaybta “EIN Coins” si aad u bilowdo daawashada fiidiyowyada. Fiidiyow kasta oo aad daawato, like, faallo iyo is -qoritaan ayaa ku heli doona qadaadiic.
Markaad haysato qadaadiic aad ku qarashgareyso, soo dejiso fiidiyowyadaada qeybta “Fiidiyowyadayda” oo dooro tirada macaamiisha, aragtida, jecel iyo faallooyinka aad rabto inaad ka hesho fiidiyow kasta.
Soo gudbi amaradaada oo fadhiiso inta shabakaddeenu wax walba bixinayso!
Sii wad kasbashada qadaadiicda lacag la’aan si aad adeegyo badan uga dalban karto fiidyowyadaada, ama booqo “Iibso Qadaadiicda” si aad u iibsato beddelkeeda.
Ma haysaa barnaamij gudbin ah?
Haa, waan sameynaa! Sifudud login oo booqo “Martiqaad & Hesho Dheeraad ah” si aad u hesho URL -gaaga gudbinta gaarka ah.
Qof kasta oo aad u tixraacdo shabakadeena diiwaangelisa koonto isla markaana kasbada lacagta birta ah wuxuu kugu kasbanayaa 10% komishan.
Taas macnaheedu waxa weeye, haddii aad tixraacdo 10 qof oo midkiiba kasbada 1,000 shillin (10,000 oo shillin wadarta), waxaa si otomaatig ah laguugu abaalmarin doonaa 10% taas, oo ah 1,000 qadaadiic.
U gudbinta isticmaaleyaasha GoViral waa habka ugu fudud uguna dadaal badan ee aad adigu si otomaatig ah uga kasban karto lacag bir ah dadaalada gudbintaada.
Xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu gudbiyo isticmaaleyaasha leh URL-gaaga gaarka ah waxaa ka mid ah:
1. Dheji fiidiyow YouTube ah oo ku saabsan GoViral.
2. E-mayl / farriin ugu dir asxaabtaada iyo asxaabtaada kale oo iyaguna leh kanaallo YouTube ah.
3. Ku qoro qoraal baloog ku saabsan GoViral boggaaga.
4. La wadaag URL gudbintaada gaarka ah ee Facebook, Twitter iyo barnaamijyada kale ee bulshada.
5. Erayga afka.
6. Hal abuur samee! Waxaa jira siyaabo aan tiro lahayn oo aad ugu gudbin karto isticmaaleyaasha GoViral!
Sidee dhakhso ah ayaad u bixisaa adeegyada?
Dhammaan adeegyada ay shabakaddeennu bixiso waxaa si dhammaystiran u dhammaystiray bulshada ka diiwaangashan isticmaaleyaasha GoViral ee dhammaystira ficilada lagu kasbado shilimaadka. Tani waxay ka dhigan tahay in xawaaraha adeeg kasta lagu bixinayo ay ku kala duwan yihiin iyadoo lagu saleynayo taraafikada aan helno, iyo sidoo kale amarrada ku jira shabakadeena daqiiqad kasta. Mararka qaarkood si dhakhso leh ayaa loo keenaa mararka qaarkoodna waxaa lagu keenaa xawaare gaabis ah.
Haddii aad rabto in amarradaada si dhakhso leh loo geeyo, waa inaad login oo booqo bogga "Xubinnimada", halkaas oo aad ugu kicin karto qorshayaasha Dahabka ama Platinum lacag ahaan oo aad ku hesho "Macaamil Mudnaan leh".
Qorshayaasha Dahabka iyo Platinum waxay fiidiyowyadaada ka hor marin doonaan kuwa kale si ay u helaan adeegyadaada oo aad uga dhakhso badan!
Sida loo doorto asalka muusiga ugu fiican Fiidyahaaga YouTube?
Marka ay dadku ka fikiraan fiidiyowyada, waxay inta badan ka fikiraan muuqaallada. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay in fiidiyowyadu aysan ahayn kaliya muuqaal - maqalku wuxuu door weyn ka ciyaaraa ...
5 Sababood oo uu YouTube ku noqonayo Koontadaada Bulsho ee Koowaad
Ilaa dhawr sano ka hor, suuqlayda badankoodu uma ay fakarin YouTube-ka isla cagtooda sida Facebook, Instagram, iyo Twitter. Si kastaba ha ahaatee, waqtiyada ayaa...
Sidee Loogu Tilmaami Karaa Hal-abuure Kale Waxyigooda Fiidiyowgaaga?
YouTube waxaa ka buuxa abuurayaal dhiirigelin leh, khaladna ma aha in lagu daro macluumaadka dadka kale fiidyahaaga. Si kastaba ha noqotee, markaad sameyso, waxaa muhiim ah inaad u tiirsato ...
Adeegyada YouTube Adeegyada Twitter Adeegyada Twitch Adeegyada Pinterest Adeegyada Spotify Adeegyada SoundCloud
Views Macaamiishan Comments jecel yahay La soco Saacadaha Ku dhejisan saamiyada
Kibir u adeegida kumanaan Isticmaalayaasha YouTube ah
Fiiri dib u eegista isticmaaleyaasha GoViral iyo khibradooda
by Koody Novak
Shan xiddig websaydh! Websaydhku si weyn ayuu u shaqeeyaa dhammaan hababka runtiina waa kuwo ammaan ah oo ammaan ah. Haddii aad raadineyso adeegga kaa caawin kara inaad hesho Free YouTube Views, Likes, Subscribers and Comments waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waad ku kalsoonaan kartaa GoViral 100%
Aad baad u mahadsantahay! Shaqo wacan! Thanks to GoViral marwalba waxaan helaa Muuqaallo YouTube oo Bilaash ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan goor hore helo GoViral, waxay noloshayda ka dhigi lahayd mid aad u fudud.
AFAR CIYAARAHA CIYAARAHA
by AFAR CIYAARAHA CIYAARAHA
Kaliya jeclaaw websaydhkan adiguna marwalba…
Kaliya jeclaaw websaydhkan marwalbana waxaad kasban doontaa macaamiil iyo jecel iyo aragtiyo fadlan bilaw adeegsiga degelkan waad jeclaan doontaa websaydhka.
Ku soo biir shabakadeena bilaashka ah oo bilaw helitaanka aragti, jecel, macaamiil iyo faallooyin maanta!
Soo hel aragtiyo YouTube bilaash ah, macaamiil bilaash ah YouTube, faallooyin bilaash ah YouTube iyo YouTube bilaash ah adoo adeegsanaya shabakadeena fudud & wax ku oolka ah.
Faa'iidooyinka Samaynta Trailer ee kanaalkaaga YouTube
Talooyin lagaga hortagayo nacaybka Fiidyahaaga YouTube